Izindaba - Ukuhlanzwa nsuku zonke kanye nokugcinwa kwama-rollers enjoloba
Ukuhlanzwa nsuku zonke kanye nokugcinwa kwama-roller ezinjoloba
Ukugcinwa kwansuku zonke ngesikhathi esifanele futhi okulungile kwe-anilox roller kungandisa impilo yensizakalo, kwandise ukusetshenziswa, futhi kulethe izinzuzo ezinkulu.
1. Iroli entsha egijimayo
Ngaphandle kokuthi kuyindlela yokugcina, ungasebenzisi ama-roller amasha ukuthola ama-oda abalulekile. Yize umqulu we-anilox ubhekane nokuphindaphindeka, ukupholisha nezinye izinqubo ngaphambi kokushiya ifektri, futhi kwangaphambi kokugijinywa, kungakunciphisa ngempumelelo ukugqokwa kwescraper ngenkathi kusetshenziswa, kepha lokhu akusho ukuthi ukubaluleka kokungena ngesikhathi sokusebenzisa umqulu omusha kunganakwa iSex. Lapho umqulu omusha ufakwa nje emshinini, unake ngesikhathi esifanele. Uma kunemigqa, yima bese usula iscraper ngesikhathi. Ezimweni zokusebenza ezijwayelekile, ubulukhuni bezinhlayiya abenele ukudala ukugqokwa kwe-anilox roller, kepha akunqatshiwe ukuthi ezinye izinhlayiya ezincane ezinzima zithinta udonga lwe-mesh ngaphansi kwesenzo se-scraper ukukhiqiza amachips amancane we-ceramic aboshiwe onqenqemeni lwe-blade, okungaphansi koyedwa. Amashifu anele ukugaya amamaki we-groove angenakulungiswa, futhi ezimweni ezinzima, umzimba we-roller uzosuswa. Lesi futhi isizathu sokuthi abasebenzisi bavame ukukhononda ukuthi ama-roller amasha ajwayele ukuba nezinkinga kunama-roller amadala. Ngokuvamile, ngemuva kwamaviki ama-2-3 wokuqhubeka kokusebenza, uma kuqhathaniswa, udonga lwesikrini aluzweli kakhulu kumthelela wezinhlayiya ezinzima ngemuva kokuthintwa ngoyinki, udokotela, kanye ne-roller roller.
2. Vala ukukhiqiza
Uma umshini ume isikhashana, iroli ye-anilox idinga ukuqhubeka ijikeleza. Lapho umshini uvaliwe isikhathi eside, i-anilox roller idinga ukuhlukanisa iscraper ngesikhathi, ikhulule i-roller ingcindezi yenjoloba, futhi ihlanze uyinki entantayo, ukuze kugwenywe ukunikezwa kwe-inki okungalingani ohlangothini oluvundlile noma kube nzima ukuyihlanza uyinki wengxenye womile.
3. Ukubambisana kwe-scraper
Isisongeli esezingeni eliphakeme siyinto ebalulekile yokuqinisekisa isipiliyoni sokusebenzisa umqulu we-anilox. Ubulukhuni benqenqemeni besishubhu kufanele bufanele, hhayi ukuthi kube nzima kakhulu. Ukuma komphetho wokusika kufanele kufaneleke futhi kunake ukushintshwa.
4. Ukuhlanzwa kwenki
Uyinki ohlanzekile ubaluleke impela ekuvikeleni imihuzuko ku-anilox roller.
5. Ukulayisha inki ukuthola i-anilox roller
Yize amasondo e-ceramic enobulukhuni obuphakeme nempilo yensizakalo ende, nawo azoguga njengoba isikhathi sokusetshenziswa sikhula. Ngenxa yalokhu, amandla okuphatha uyinki we-anilox roller ancipha kancane kancane ngokwanda kwesikhathi. Ngakho-ke, uma ufuna ukuphatha ukuphathwa okulinganiselwe nokubanzi kwe-anilox roller, udinga ukuthola umthamo wangempela wenki we-anilox roller.
Njengoba imvamisa yalo msebenzi ingadingi ukwenzeka kaningi, futhi kuyisinqumo esihle ukunikela lo msebenzi kumhlinzeki we-anilox roll.
I-anilox roller kufanele igcinwe endaweni eyomile ngaphakathi ezindlini ukuyivikela ukuthi ingalimali manzi, imvula noma ilanga.
· Lapho ufaka iroli ye-anilox, vikela indawo engaphezulu ukuze uvikele ukulimala kokushayisana. Lapho ugcina, sebenzisa iphakethe elenziwe nge-fiber yemvelo ukusonga i-roller.
· Lapho ubeka, lungisa i-roller kubakaki okhethekile, futhi ungayibeki iroli phansi ngokungafanele.
· Uma unyakaza, kuyadingeka ukuthi udlulise amakhanda we-shaft kuzo zombili izinhlangothi ze-roller esikhundleni sendawo yokugwedla ukugwema ukulimala nokungqubuzana.
· Ngemuva kokuphrinta noma ukumboza ngakunye, ubuso be-roller kufanele buhlanzwe ngesikhathi ukuze kugwenywe i-inki noma i-coating slurry esele phansi kwe-mesh ukuze yomile futhi ivimbe.
· Njalo sebenzisa imakhroskophu enezikhala ukuhlola, bese uthatha izinyathelo ezihambisanayo uma kutholakala ukugqokwa nokuvaleka.
· Ungacindezeli okweqile ngokulungisa inani lokudlulisa, elizokhulisa kalula ukuhuzuka kwe-roller anilox kanye ne-scraper.
· Ungazungezisi umqulu we-anilox owomile ukhombe udokotela.
· Udinga ukusetha kabusha ingcindezi yesishisi njalo lapho uyibuyekeza, futhi ukulungiselelwa kwengcindezi okungalungile kuzodala izingcezwana ezishubile.
· Misa ukusebenzisa okokususa okudlulile ekugqokeni okuphezulu, setha inqubo yansuku zonke yokuqapha ukugqokwa kwesishali, nokulawula ukugqwala kwesiphiki ngokuqinile.
· Gcina iscraper isilingane ne-roller ngaso sonke isikhathi, futhi uyilinganise ngezikhathi ezithile.
· Ungasebenzisi i-inki engezansi ne-coating slurry.
· Susa uthuli ebusweni bomkhiqizo ophrintiwe noma isisekelo sombala ngaphambi kokuphrinta ukuze ugcine uhlanzekile.
· Sebenzisa isilinganiso esifanele sokujula kwenani lokuvula.
01. Umugqa wokunwaya
Ukuhlaziywa kwesizathu: Isizathu semikrwelo ebusweni be-ceramic anilox roller ukuthi izinhlayiya ezincane eziqinile zixutshwe uyinki. Lapho udokotela eklwebha uyinki, izinhlayiya ezincane eziphakathi kwenkaba kadokotela ne-roller inki ziklwebha indawo yobumba. Izinhlayiya ezincane ezinjalo ezinzima zingaqhamuka ezinhlamvini zensimbi ezichithwe ngudokotela noma ngepompo likayinki, izinhlayiya eziyinki eziqinile ezomile, noma izinhlayiya zokungcola.
Faka okokuhlunga kanye nozibuthe kuhlelo lokuphakelwa kukayinki ukuze ususe izinhlayiya zensimbi ezigugile noma ezicishiwe
Qinisa ukuhlanzwa kwazo zonke izingxenye zohlelo lokuphakelwa kukayinki ukuvimbela ukwenziwa kwezinhlayiya ze-inki ezomile
· Uma usebenzisa ikamelo elenga ummese wenki, kufanele kube no-inki owanele ozogeleza kulomgodi, ukuze isikhunta sithanjiswe ngokuphelele futhi sisuse izinhlayiya zeskripthi se-abraded
02. Ukugqoka okungavamile
· Ukufakwa kwesisuli akulingani namandla alingani
· Isisuli sicindezelwe ngokweqile noma sigcotshiswe ngokwanele
Ikhwalithi yesendlalelo se-ceramic ayikho ezingeni elijwayelekile
· Faka i-squeegee ngokucophelela bese usetha i-squeegee ngaphambi kokufaka
Hlanza ngokucophelela umnikazi wommese nomugqa wommese
· Thuthukisa ikhwalithi yesendlalelo se-ceramic
03. Mesh evinjiwe
Ukuhlaziywa kwesizathu: umsebenzi wokuhlanza lapho i-anilox roller isetshenzisiwe awufiki ngesikhathi futhi awuphelele
· Bheka umphumela wokuhlanzwa kwale meshi ngesibonakhulu esifanele
Qinisa ukuhlanzwa kwe-anilox roller ngemuva kokuphrinta
04. Ukulimala ngokomzimba
· Ukushayisana okuqondile nezinto ezilukhuni kubangela ukulimala ungqimba lwe-ceramic
· Indlela engafanele yokuhlanza nokukhethwa kokuqoqwa kwencwadi kungadala umonakalo odongeni lwe-mesh
Qinisa umqondo wokuzibophezela ukugwema izingozi zokushayisana kwemishini
· Lapho ubeka ngaphandle komshini, gqoka ikhava yokuvikela irola yephethini
· Ukuqonda ngokujulile izici zezindlela ezahlukahlukene zokuhlanza, khetha indlela efanelekile yokuhlanza, dlala ngokugcwele kuzinzuzo zendlela, futhi ugweme izinkinga ezingadalwa yindlela
Funda imiyalo yemishini yokuhlanza noma okokuhlanza ngokuningiliziwe, bese ukhetha imigomo yokusebenza kahle
05. Ukugqwala namabhomu
Ukuhlaziywa kwembangela: Lokhu kubangelwa ukugqwala kwento eyisisekelo ye-anilox roller, edala ukuthi indawo ye-anilox roller igobeke, futhi ezimweni ezinzima, ize ibangele nokuwa kobumba bendawo.
· Uma u-oda ama-roller anilox e-ceramic, sicela ukhombise imvelo yokusebenzisa ama-anilox rollers. Uma kuyindawo enamandla ye-asidi nemvelo ye-alikhali, umenzi udinga ukuqinisa izinyathelo zenqubo yokulwa nokugqwala.
· Sebenzisa insimbi engagqwali njenge-base roll material
· Gwema ukusebenzisa i-asidi enamandla namakhemikhali wokuhlanza amakhemikhali anamandla ukuhlanza i-anilox roller
Izindlela zamanje zokuhlanza imiqulu ye-anilox zingahlukaniswa ngezigaba ezilandelayo:
1. Sebenzisa i-ejenti ekhethekile yokuhlanza i-anilox, ngensimbi yensimbi noma isiponji se-nano ekuhlanzeni online.
2. Sebenzisa umshini wokuhlanza we-ultrasonic nge-ejenti ekhethekile yokuhlanza ekuhlanzeni.
3. Ukuhlanzwa kwamanzi okuphezulu
4. Ukuhlanzwa kwe-Laser.
· Ibhulashi lensimbi, isipanji se-nano
Izinzuzo: ukuhlanza okulula, akukho ukuqaqa nokuhlanganisa, ukusebenza okulula, ukuhlanza ngokuphelele, akukho mishini, nezindleko eziphansi.
Okubi: Kudingeka kuphela i-alkaline yokuhlanza i-alkaline. Kwezinye izinto ezinenkani ezingaphili, umphumela awufani nokuhlanzwa kwe-ultrasonic.
· Ukuhlanza amanzi ngomfutho ophakeme
Izinzuzo: Ngokuhlobene nemvelo futhi iphephile, nomphumela omuhle wokuhlanza.
Okubi: Intengo yemishini iphezulu. Ezimweni eziningi, kusadingeka ukusebenzisa i-solvent ukucwilisa i-ceramic anilox roller ngaphambi kokuvula ukuhlanzwa kwamanzi okuphezulu, futhi kusenezindleko zokusetshenziswa.
Izinzuzo: Akukho msebenzi owenziwayo odingekayo, futhi umphumela wokuvinjelwa kwenkani ubonakala.
Ububi: 1. Okokusebenza kuyabiza, futhi kusadingeka izixazululi zokuhlanza ngaphezu kwemishini;
2. Ukulawulwa kwepharamitha ye-ultrasonic kudinga ukucaciswa, futhi kuyadingeka ukuthi kuhlolwe ngokunembile ukuvaleka kwe-anilox roller bese unikeza umuthi ofanele, kungenjalo kungadala ukulimala ku-roller ye-anilox;
3. Ukusetshenziswa kudinga imvamisa ephansi ejwayelekile. Ukusetshenziswa kaningi kokuhlanzwa kwe-ultrasonic kwe-anilox roller kuzolimaza udonga lwe-mesh futhi kuthinte ngqo impilo ye-anilox roller.
· Ukuhlanza i-Laser
Izinzuzo: Umphumela wokuhlanza amandla ahlanzekile futhi aphelele, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, akukho okunye okudingekayo okudingekayo, akukho monakalo ku-anilox roller, futhi kungahlanzwa ku-inthanethi ngaphandle kokuqaqa i-anilox roller, ikakhulukazi efanelekile ekuhlanzeni ama-roller anilox amakhulu.
Okubi: Imishini ibiza kakhulu.
Indlela ngayinye yokuhlanza inezinzuzo nezinkinga zayo, nokuthi ungayikhetha kanjani kudingeka inqunywe yinkampani yokuphrinta ngokuya ngesimo sayo.
Akunandaba ukuthi iyiphi indlela yokuhlanza, ama-acidic yokuhlanza izinto kanye nokushisa okushintshanayo nomswakama imininingwane emibili evame ukunganakwa ebangela ukuthi i-anilox roller iqhume. Uma kuqhathaniswa nemvelo ene-alikhali, imvelo ene-acidic kungenzeka ukuthi yonakalise i-substrate ngaphansi kocingo lwe-ceramic. Ngakho-ke, lapho isimo sokusebenza siyindawo yokusebenza ene-asidi, kufanele icaciswe kusengaphambili nomenzi lapho enza ngezifiso, ukuze izinga elihambisanayo lokwelashwa kokulwa nokugqwala likwazi ukwenziwa. Ngaphezu kwalokho, ulwazi luye lwafakazela ukuthi kwezinye izindawo ze-workshop ezinokushisa okuphezulu nomswakama nasezindaweni ze-workshop ezisebenzisa izixazululi eziningi, ungqimba lwamanzi afingqiwe lwakhiwa kalula ebusweni bomqulu we-anilox. Kumele isulwe ngesikhathi ngesikhathi sokugcina bese igcinwa ngemuva kokumiswa. Iroli ye-anilox ehlanziwe kufanele yomiswe ngaphambi kokungena endaweni yokugcina.
Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, I-Hot Melt Glue Isicelo, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe,